Nvidia sidoo kale waxay dooneysaa inay gasho suuqa wadista baabuurta iskeed u shaqeysa waxayna heshay DeepMap | Laga soo bilaabo Linux
Dhawaan Warka waxaa la sii daayay in Nvidia ay saxiixday heshiis lagu doonayo in lagu iibsado shirkadda DeepMap, Bilaabis sifiican loo maal galiyay oo leh tikniyoolajiyad khariidadeed oo ka caawinaysa gawaarida iskeed u maamusha wadada si kalsooni leh.
Deepmap waxay u taagan tahay bixinta alaabooyinka ku saleysan teknolojiyadda qariirada. Midkood waa DeepMap HDR oo ka caawisa soo saarayaasha baabuurta inay abuuraan khariidado ayna si joogto ah ugu cusbooneysiiyaan macluumaadka ugu dambeeya.
Natiijo ahaan, gawaarida iswada ayaa had iyo jeer hela macluumaadka ugu saxsan ee ku saabsan deegaankooda. Intaa waxaa sii dheer, DeepMap RoadMemory waxay sameysaa khariidado si toos ah u adeegsanaya dareemayaal ku xiran gawaarida iswada.
Gaar ahaan Xalka khariidaynta DeepMap horeyba waxaa u aqbalay warshadaha gawaarida iswada helitaankuna waxaa lafilayaa inuu kobciyo qaybta Nvidia ee xalalka darawalnimo ee iskiis u shaqeynaya iyadoo lagu darayo tiknoolajiyada khariidaynta awooda badan ee DeepMap nidaamkeeda hawlgalada ismaamulka, Nvidia Drive.
In kasta oo aan la shaacin qodobada heshiiska, waa ammaan in loo qaato in Nvidia ay lacag aad u fara badan ku bixinayso bilowga. DeepMap waxay soo aruurisay in kabadan $ 90 milyan oo maaliyad ah tan iyo markii la bilaabay lix sano kahor maalgashadayaasha uu kamid yahay Andreessen Horowitz.
Teknolojiyada DeepMap waxay fidin doontaa Khadka Waxsoosaarka Koraaya ee Nvidia qaybta baabuurta. Shirkaddu waxay u samaysay xalal dhammaad illaa dhammaad loogu talagalay baabuurta iskeed u shaqeysa oo aan ku jirin kaliya jajabyada, laakiin sidoo kale qalabka softiweer ee dhismaha, tababarka, iyo tijaabinta nidaamka wadista AI.
Cali Kani, oo ah madaxweyne ku xigeenka iyo maareeyaha guud ee shirkadda Automotive ee NVIDIA ayaa yiri "La wareegistu waa mid lagu ansaxinayo aragtida DeepMap, tikniyoolajiyadda iyo dadka gaarka ah." "DeepMap waxaa lafilayaa ineey balaariso badeecadaheena khariidadeynta, waxey naga caawineysaa inaan kor u qaadno howlaha khariidadeynta aduunka oo dhan, iyo inaan balaarino khibradeena iswada ee wadista gawaarida."
James Wu, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda DeepMap, ayaa yidhi "NVIDIA waa shirkad layaableh oo aduunka isbadalaysa lana wadaagaysa aragtideena ah dardar galinta ismaamulka aaminka ah". Ku biirista xoogaga NVIDIA waxay u ogolaaneysaa tikniyoolajiyadeena inay si dhaqso leh u kordhiso ayna ka faa'iideysato dad badan dhaqso. Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno safarkayaga iyada oo qayb ka ah kooxda NVIDIA.
Nvidia si ay usii wado alaabada DeepMap dhowaanLaakiin Chipset-ka iyo khabiirka ku takhasusay sirdoonka ee farsamada ayaa sidoo kale la jaan qaadi doona tikniyoolajiyadda iyada oo leh xalalkeeda gawaarida xariifka ah ee iskiis u madax bannaan.
Xayeysiiska Nvidia kuma jiro kaliya xalal dhameystiran oo loogu talagalay gawaarida iswada, laakiin sidoo kale software loogu talagalay dhismaha, tababarka, iyo tijaabinta nidaamyada wadista ee ku saleysan AI. Tan, Nvidia waxay bixisaa qalab iyo xalal loogu talagalay tababarka shabakada neerfaha, ansaxinta xarunta xogta iyo codsiyada awooda xisaabinta sare ee gawaarida.
Xarunta dhexe ee faylalka gawaarida ee Nvidia waa taxanaha 'Drive AGX' oo ka mid ah processor-ka-chip-ka. Waxaa lagu geyn karaa gudaha gawaarida iswada si ay ugu xoogsadaan barnaamijka softiweerka ah ee sirdoonka ee sameeya go'aamada hagida.
Qeybta ugu cusub ee taxanaha Drive AGX waa Orin, oo lagu tilmaamay inuu toddobo jeer ka dhakhso badan yahay kii ka horreeyay markii ay soo baxday. Qalab kasta oo Orin ah wuxuu isku daraa walxaha farsamada gacanta ee unugyada gacanta ee bartamaha Arm si ay u gaarsiiyaan ugu badnaan 200 oo bilyan oo hawlgal ilbiriqsi kasta.
Tiknoolajiyada khariidaynta Maxay Nvidia Ka Heli Doontaa Hanashada DeepMap waxay sare u qaadi doontaa awoodaada inaad wax ka qabato shuruudo kale mashruuca muhiimka ah ee shirkadaha kuwaasoo sameeya gawaari iskeed u shaqeysa. Isla mar ahaantaana, heshiisku wuxuu ka caawin karaa chipmaker inuu xoojiyo tartanka ka dhanka ah shirkadda Intel Corp. ee Mobileye.
Marka la helo tiknoolajiyada 'DeepMap', Nvidia waxay dhawaan awood u yeelan doontaa inay la tartanto Mobileye faylalka tacliinta ee Intel. Intel's Mobileye wuxuu bixiyaa noocyo isku mid ah badeecooyin iyo xalal loogu talagalay gawaarida iswada. Helitaanka DeepMap waa in lagu dhammeeyaa rubuca saddexaad ee sanadkan.
Nvidia waxay rajeyneysaa inay xirto soo iibsiga rubuca seddexaad ee sanadkan. Tikniyoolajiyadda bilowgu waxay ballaadhin doontaa shirkadda hadda jirta ee ah khariidaynta wadista, taas oo u oggolaanaysa baabuurta iskeed u madax-bannaan inay soo ururiyaan khariidad waddo ah oo laga soo ururiyo xog-ururiyayaashooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Nvidia sidoo kale waxay dooneysaa inay gasho suuqa wadista gawaarida ee madaxbanaan waxayna heshay DeepMap
CuteFish, bey'ad qoraal cusub oo ku jirta qaabka dhabta ah ee 'MacOS style'